ဆရာတော်ကြီး ဥူးကေလာသကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး စာရေးဆရာမကြီး အမ ခိုင်ဇင်သက် နှင့် အက်ဒမင် အားလုံး ဆိုင်ရာအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ဂါရဝ ဒီစာလေးနဲ့ပြုပါရစေ အမှားများပါပါ လျှင်လဲ စာသိပ်မရေးတတ်ပါ၍ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရှင် ဆရာမကြီး အမ ခိုင်ဇင်သက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆိုတော့ ဆရာမကြီး စာတွေဖတ်ရင်း အရေးသားကောင်း ရင်ထဲနှလုံးသားထဲ စီးဝင်အောင် မေတ္တာ နှင့်ရေးသားထားတော့ ကိုယ်ပဲ မြေဇင်းကို ခုပဲရောက်သွား သလို ကိုယ်ပဲ နတ်ပြည်က ဘုရားတွေပဲ ဖူးရသလိုခံစားရတော့ မြေဇင်းနည်းကိုထိုင်ချင်လာရော ဆရာမကြီး တင်ထားတဲ့ အွန်လိုင်း တရားစခန်းထိုင်လို့ရတဲ့ အကြောင်း ဆရာမကြီးရဲ့ တိုက်တွန်း စာလေး တွေ့ လိုက်တော့ ဝမ်းသာ လွန်းလို့ ဆရာမကြီးကို လှမ်းပြောတော့ အပတ်စဥ် ၆ ကို စာရင်း ပေး လိုက်ပါ ဝင်လို့ ရ အောင်လဲပြောပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် အက်ဒမင်တွေလှမ်းစာရင်းပေးတော့ ၆ ကပြည့်သွားလို့ 26 ရက်စမယ့် အပတ်စဥ်၇ ကိုရပါတယ် တရားစခန်းဝင်ရတော့မှာမို့ အရမ်း တက်ကြွ ပီတိဖြစ်ရပါတယ် ဘာလို့ဒီလောက်ပီတိဖြစ် ပျော်ရသလဲဆိုတာ ကျမတို့က လဘက် ရည်ဆိုင်ပါ အချိန်ပြည့် အလုပ်ရူပ်ပါတယ် ကိုယ်ခွဲလဲမရှိပါ ကိုယ် အပြင်ထွက်ရင် အမျိုးသား တယောက်ထဲ အရမ်းပင်ပန်းပီးမနိုင်ပါ ဒါမို့ ဘယ်တရားစခန်းမှ မဝင်နိုင်ခဲ့ပါ ခု ကိုဗစ်နဲ့မို့ ဆိုင် ပိတ်ရပြန်တော့လဲ ဘယ်တရားစခန်းမှမဖွင့်ပြန်ပါဘူး ။
အရင်တခါ ၃လပိတ်တုန်းကလဲ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ပဲ တရားခွေ ဖွင့်ပီး ထိုင်ရ တာပါ ကျမ နိဒါန်း ရှည်တယ်မထင်ပါနှင့်ရှင် ဒါလေးတွေကစ ထည့်ပြောမှ မြေဇင်း တရား ဘယ်လောက် အကျိုး ကြီးမားတာသိသေချင်လို့ပါ ကျမ အသက်၂၇ နှစ်က နှလုံးရောဂါဖြစ်ပါတယ် မရလောက်တော့ တဲ့အဆင့်ပါ နှလုံးဆရာဝန်မကြီးက နောက်ဆုံးလက်နက် ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ စာအုပ် လက်ဝါးလောက်သေးသေးပါးပါးလေး ပေးလိုက်ပါတယ် သမီးရယ် နှာသီးဖျားလေး ဒီလို လေး မှတ်လို့ သင်ပေး လိုက်ပါတယ် အဲဒီထဲက ဝင်လေ ထွက်လေ မှတ်လိုက်တာ ခု အသက် ၄၉ ရောက်တဲ့အထိ ပါပဲ အရင်က ထိုင်တယ် အလုပ်ပေးတရား အတော်များများနာပါတယ် အလင်း နမိတ်လဲရပါတယ် သကြားမင်း နတ်သား နတ်သမီး လာလာကန်တော့တယ် အာရုံနမိတ်ပဲ အာရုံ နမိတ်ကို အလိုက်ရဘူးလို့ ပြောကြတော့ အဲနမိတ်တွေမကောက်တတ်ခဲ့ပါဘူး ခန္ဓာ တခြား နာမ် တခြားလဲတွေ့ပါတယ် ဘာမှဆက်မလုပ်တတ်ခဲ့ပါဘူး။
သမာဓိအားကောင်းတယ် လူကြည်နေတယ် စိတ်ကြည်နေတယ် ကံကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ရုပ်နာမ် ဆိုတာလဲကွဲလာတယ် ဘာမှ အကြောင်းမရှိပဲ အကျိုးဖြစ်မလာဘူးဆိုတာလဲ ထိုင်ပါများတော့သိ လာတယ် ကံအသစ်ကံအဟောင်း နားလည်လာတယ် ဒါပေမယ် သေခါနီးဝေဒနာ ဘယ်လိုကျော် ဖြတ်နိုင်ပါ့မလဲ အမြဲသိချင် နေမိတယ် ဥာဏ် စဥ် ဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာလဲ မသိခဲ့ပါဘူး ဘယ်လို ဆက်ပီးဘယ်လို စိတ်ထားပီးမှတ်ရမယ်မသိခဲ့ပါဘူး 26 10 2020. ညကိုးနာရီ စပါပီ ဆရာတော့် အသံကြားထဲက ပိုပြီးတက်ကြွ ပီတိဖြစ်နေပါပီ ဗုဒ္ဓါနုတ်သတိ မေတ္တာနုတ်သ မရဏာနုတ်သတိ ရပါတယ် ဝါယူဝါမှတ်ကြ မမှတ်တတ်ပဲ နှာသီးဖျားဝင်တဆုံးထွက်တဆုံးပဲ မှတ်နေမိ လို့ တော် တော်လုပ်ယူ ရပါတယ် တခါခါ သမာဓိယူတာပဲနှာသီးဖျားလဲရမှာပါ ဆိုပီး ဝါယူဝါမှတ် ပစ်ထား မိပြန်ရော ပီးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး ဆရာတော်နည်း ကိုဝင်မှ ဆရာ့တော်နည်းလုပ်ရမှာ ပဲ ဆိုပြီး ဝယူဝါမှတ်ပြန်လုပ် နဲ့တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်။
သုံးရက်မြောက်တဲ့ နေ့မှ အဆင်ပြေသွား ပါတယ် တရက်ကို လေးနာရီ ငါးနားရီ ခြောက်နာရီ သုံးလေးချိန်ခွဲပီး ထိုင်ပါတယ် နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကြိုးစားလိုက်တာ ​ဘုရားလဲဖူးရပါတယ် ဖွား ပွင့် ဟော စံ ​လဲဖူးရ အတိတ်ဘဝ ငါးဘဝလဲ ပြန်မြင်ရပါတယ် ဆရာတော် တရားစစ်ဖို့နာမည် ခေါ်တိုင်း ပိုအားရှိ ပိုဝရိယတက်ရပါတယ် လိုအပ်တာများကိုလဲ သင်ပေးတဲ့ဆရာမကြီး ကြောင့် လဲ လမ်းမှန်တွေ့ရပါပီ ခုဆို ဥာဏ်စဥ်ဆယ်ပါးလဲ အဆင့်ဆင့်မှတ်လို့ရပါပီ နတ်သားနှစ်ပါးနတ် သမီးတပါးလဲ လက်အုပ်ချီပီးဘေးကဝန်းရံနေတာလဲတွေ့ရပါတယ် ဒီနည်းဒီတရား ရလိုက်တာ ဟန်ကျလိုက်တာ ဆိုပီး တသ သနဲ့ပီတိဖြစ်နေရပါတယ်။
ပီတိဖြစ်တိုင်း ကျေးဇူးတင် ရပါတယ် စာရှည်သွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် ဆရာတော်ဘုရား ကြီး ဆရာမကြီး ခိုင်ဇင်သက် အက်ဒမင်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး အားရှစ်ခိုး ဂါ ရဝပြု ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် နောက်လဲဝင်ခွင့်ရရင်ဝင်ချင်ပါသေးတယ်ရှင့်။
အပါတ်စဥ် ၇. Id 794 ဒေါ်ရီရီမြင့် ပါရှင်
Daw Yi Yi Myint (Facebook Account မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)